Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Guatemala » Njem nleta na Guatemala na Cancun bịara dị mfe
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Guatemala • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Guatemala na -apụta dị ka etiti na Central America, na -eke njikọ na Mexico na karịa. Obodo Cancun nke mepere emepe nke Mexico dị mfe ugbu a site na Guatemala, Honduras na gafere, na -emepe mmekọrịta njem n'etiti mba abụọ a.
Nke a bụ ekele TAG ụgbọ elu, onye na -ebu Guatemala na -ewu ewu.
Ụgbọ elu TAG ga -amalite ọrụ na Mexico site na Ọgọstụ, yana ụgbọ elu ga -ejikọ n'obodo Guatemala na Tapachula, site na Ọgọst 13, na Guatemala na Cancun, site na Ọgọst 19.
Ndị njem ga -enwe nhọrọ nke ụgbọ elu na -ebelata oge na ọnụ ahịa, ụzọ ọhụrụ ahụ ga -abara ndị njem na ndị njem ụgbọ ala na -aga ebe abụọ a uru.
Guatemala dị ka obodo Mkpụrụ Obi nke Ụwa na dị ka obi nke ụwa Mayan, na -enye ụdị dịgasị iche iche nke ihe okike eke, nkà mmụta ihe ochie, na gastronomy, n'etiti ndị ọzọ.
Cancun abụrụla ebe njem nlegharị anya na Meksiko ọ bụghị naanị maka ndị America kama maka ndị ọbịa si n'ofe Central na South America, yana Europe.
Ijikọ Cancun na Tapachula bụ nnukwu nkwalite ijikọ Guatemala na netwọkụ TAG ndị ọzọ na Central America na obodo ezumike Mexico a.
Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG) bụ ụgbọ njem nkeonwe na ụgbọ elu ibu ya nwere isi ụlọ ọrụ ya na Mpaghara 13 nke Guatemala City, yana isi ya na ọdụ ụgbọ elu La Aurora International. E hiwere ya na 1969 na Guatemala City
Site na Ọgọstụ 13, ụzọ ọhụrụ Guatemala-Tapachula-Guatemala ga-aga njem nlegharị anya na-enwe ugboro ise kwa izu:
Flight skyway Frequency Atụmatụ
220 Guatemala-Tapachula Monday-Friday 10: 30-12: 15 elekere
221 Tapachula-Guatemala Monday-Friday 14: 00-13: 45 elekere
Ka ọ dị ugbu a, site na Ọgọstụ 19, ụzọ ọhụrụ Guatemala-Cancun-Guatemala ga-eje ozi njem na-esote ya na ugboro anọ kwa izu:
200 Guatemala-Cancún Tuesday, Thursday, Saturday na Sunday 10: 00-13: 10 elekere
201 Cancún-Guatemala Tuesday, Thursday, Saturday na Sunday 14: 10-15: 20 elekere
Julio Gamero, onye isi oche nke ụgbọ elu TAG, kwuru na "mpaghara ndịda-ndịda ọwụwa anyanwụ Mexico dị oke mkpa na ịma mma maka ndị njem na ndị ọchụnta ego, maka ịma mma ya, ọgaranya ọdịbendị ya na mkpa mpaghara ahụ nwere maka uto akụ na ụba."
“Obi dị anyị ezigbo ụtọ ịmalite ọrụ na Mexico. Ihe nrụpụta akụ na ụba dị mkpa ga-abụ ụgbọ oloko Mayan, nke ga-abụ isi nkuku maka mmepe mpaghara ndịda-ndịda ọwụwa anyanwụ, site na ịmepụta ọrụ, imepụta itinye ego na ịkwalite ọrụ njem, "ka ọ gbakwụnyere.
Gamero kelere ndị ọchịchị Mexico nke Quintana Roo na Chiapas maka ntụkwasị obi ha, yana Federal Ministry of Tourism, ndị mmekọ azụmahịa ya, na Guatemalan Tourism Institute, nke na -eme ka o kwe omume ime ka njikọ ikuku dị n'etiti mba abụọ a bụrụ eziokwu.
TAG ụgbọ elu bụ ụlọ ọrụ Guatemalan dị pasent 100 nke jisiri ike ruo afọ 50 na njikọ ikuku na mmepe. Ọ na -arụ ụgbọ elu 27 kwa ụbọchị na Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize, na ugbu a na Mexico, nwere ụgbọ elu nke oge a karịa 20 ụgbọ elu.
Na mgbakwunye, ụgbọ elu TAG nwere nkwenye siri ike maka ichebe ahụike nke ndị njem ya, yabụ na ụgbọ elu ya niile ọ na -etinye usoro ịdị ọcha na ịdị ọcha.